ब्लफ कल, मिस कल, तथा जिस्कने ख्याल ठट्टा गर्ने गर्छन् | NepaleKhabar.com
ब्लफ कल, मिस कल, तथा जिस्कने ख्याल ठट्टा गर्ने गर्छन्
May 6, 2020 | 10:02 pm
शान्ति लामा / काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । ‘लक डाउनले पसल खुलेको छैन । रिचार्ज कार्ड हालिदिनुस् न ।’
‘कोरोनाबाट बच्न स्यानिटाइजर नै किन लगाउनुपर्ने ? त्यसको सट्टा रक्सी खाए हुँदैन ?’
टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको टोल फ्रि नं १११५ मा हिजोआज कर्मचारीहरु यस्तै हाँस्यास्पद प्रश्न झेल्न वाध्य छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बारे परामर्श तथा जानकारी दिन सञ्चालन गरिएको निःशुल्क फोनमा यस्ता ठट्यौला फोन कलबाट कर्मचारीहरु दिक्क छन् ।
लक डाउनको बेला पहिलेभन्दा फोन गर्नेको संख्या निकै बढेको भए पनि नचाँहिदो टेलिफोन कलले कर्मचारीलाई दुःख दिने गरेको महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत अच्युत रेग्मीले बताउनुभयो ।
‘ब्लफ कल र मिस कलले कर्मचारी हैरान भएका छन्,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत अच्युत रेग्मीले भन्नुभयो, ‘साँच्चिकै आपत परेर वा जानकारी र परामर्श आवश्यक भएर फोन गर्नेको संख्या न्यून छ ।’
उहाँका अनुसार अधिकांश टेलिफोन कल जिस्किन उद्देश्यले गर्ने गरिएको छ । टेलिफोनमा बोल्न नजान्ने बालबालिकालाई बोल्न लगाउने जस्ता काम सर्वसाधारणबाट भएको उहाँको भनाइ छ ।
‘फोन गरेर साना बच्चाहरुलाई बोल्न दिइन्छ । त्यस्ता फोन कलको उद्देश्य के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन । फोन गरेर चुपचाप बसेर होल्डमा राख्छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता कलहरुले हाम्रो समयको बर्बादी मात्र हुन्छ ।’
कतिपयले भने कर्मचारीलाई जिस्काउनका लागि समेत फोन गर्ने गरेका छन् । अधिकृत रेग्मीका अनुसार किशोर तथा युवाहरुले समूहमा बसेर हटलाईनमा फोन गरी महिला कर्मचारीलाई जिस्काउने गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग टेलिफोन उठाउने महिला कर्मचारीहरु पनि छन् । महिलाको स्वर सुनेपछि ‘केटी बोलिराछ सुन’ भन्दै समूहमा बसेर जिस्कन्छन् ।’ जिस्काउने नियतले फोन गर्नेहरुको कोरोना संक्रमणबारे भने कुनै जानकारी वा परामर्श लिन खोज्दैनन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणबारे जानकारी दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११३३ र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले १११५ मा नागरिकलाई आपतकालीन परामर्श तथा जानकारी प्रवाह गर्दै आएको छ । यी नम्बरमा सर्वसाधारणले निशुल्क फोन गरी कोरोना भाइरसबारे जुनसुकै आधिकारिक जानकारी लिन सकिन्छ ।
आपतकालमा विषयगत सूचना प्रवाहका लागि सञ्चालन गरिएको टेलिफोन सेवाप्रति नागरिक भने संवेदनशील नभईदिएको अधिकृत रेग्मी गुनासो गर्नुहुन्छ । यहाँ कोरोनासम्बन्धी भन्दा धेरै अन्य विषयमा कुरा गर्न फोन आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । ब्लफ कल, मिस कल, होल्डिङ कल तथा जिस्कने नियतले फोन नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
लक डाउन किन गर्नुपरेको ? यो कहिले खुल्छ ? २५ गतेपछि लक डाउन खुल्छ कि खुल्दैन भन्नेजस्ता नीतिगत प्रश्नहरु प्नि आउने गरेका छन् । यस्ता प्रश्न गर्नेलाई कोरोनाबाट बच्न लकडाउनको महत्वबारे सम्झाई सामाजिक दूरी कायम गर्न, हात धुन, मास्क लगाउन अनुरोध गर्ने गरिएको रेग्मीले बताउनुभयो ।
कोरोनाका लक्षण के हुन् ? कसरी बच्ने ? जस्ता प्रश्न सोध्न भने कमैले फोन गर्ने गरेको कर्मचारी बताउँछन् । हाल कोरोना फैलिएका ठाउँका भन्दा अन्यत्रबाट बढी फोन आउने गरेको जनस्वास्थ्य अधिकृत रेग्मी बताउनुहुन्छ । बैतडी, काठमाडौँ, डडेलधुरा, रौतहटबाट अधिकांश फोन आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महाशाखाले विहान छ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म टोल फ्रि नम्बरमार्फत सूचना र परामर्श प्रवाह गर्ने गरेको छ । लक डाउनको सुरुसुरुका दिनमा दैनिक १० हजारभन्दा बढी फोनहरु आउने गरेपनि अहिले दैनिक झण्डै एक हजार आठ सय वटा फोन आउने गरेको छ । स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट जस्ता स्वास्थ्यकर्मीले सूचना तथा परामर्श दिन्छन् ।
उता स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोल फ्रि नं. ११३३ मा पनि अनावश्यक फोनहरु धेरै आउने गरेका छन् । जिस्काउने, फोन गरेर नबोल्ने, बालबालिकालाई बोल्न लगाउने, एउटै नम्बरबाट घरीघरी फोन गरी नचाहिँदो प्रश्न सोध्ने, मिसकल गरिरहने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।
दुई कल सेन्टरले द्विविधा
महाशाखाको १११५ नं. पहिले नै सञ्चालनमा रहेको सेवा हो । यो सञ्चालनमा रहेकै बेला मन्त्रालयमा समानान्तर किसिमको ११३३ नम्बर स्थापना गर्दा मानिसमा द्विविधा उत्पन्न भएको महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रेग्मीको भनाइ छ । एउटै मानिसले दुईतिर कुरा गर्दा कहिलेकाहिँ जवाफ फरक पर्न गए त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्ने भएकोले एउटै टोल फ्रि नं. चलाउँदा राम्रो हुने उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ ।